Muto Wakakodzera Kukosheswa? | Martech Zone
China, July 30, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Chris Lucas
Kana usati wanzwa nezve Horizon Realty ingo tsvaga nekukurumidza paGoogle uye iwe unowana zvimwe zvinonakidza zvinyorwa, seichi chinyorwa Mashable. Nezve kukurumidza kumashure, aimbova maroja wavo, Amanda Bonnen, akatumira tweet nezve kugara muforoma mune chimwe chezvikamu zvavo. Horizon yakaisa a mhosva ye $ 50,000 kurwisana naMai Bonnen. Zvino zvimwe chokwadi chiri kubuda, asi pane chidzidzo chikuru chinofanira kudzidzwa pano uye kwete chete kuti Social Media inogona kudzoka kuzokuruma.
Chidzidzo 1: Ziva ndiani ane simba
Paunopinda munzvimbo isina chokwadi, angave enhau enhau, mabloggi, kana kunyange chinyakare midhiya, zvakakosha kuti unzwisise kuti ndiani chaizvo ane simba. Nhasi kuchinjika kwemagetsi kuri pachena asi havazi vese vanowana. Ndosaka zvakakosha kuti usati warwa chero hondo kuruzhinji, kunyangwe iwe uchifunga kuti uri pachokwadi, unzwisise kuti zviitiko zvinogona sei uye zvinogona kutamba. Zvingangodaro, kunyangwe iwe uchifunga, hausi kubata makadhi ese.
Chidzidzo 2: Usaunze banga kurira kwepfuti
Ita shuwa kuti kana iwe uchizoburitsa musoro wenyaya unosanganisira pasocial media, iwe unonzwisisa maficha enhau. Ita shuwa kuti iwe wagadzirira kushandisa svikiro iri kutaurwa nezvako kuwana kwako. Zvikasadaro kana iwe ukadhonza iro banga uye muvengi wako, chaiye kana kwete, anosunungura pfuti iwe uchave uri wakagara dhadha.
Seizvo Mashable posvo zvinonyatso kuzviisa.
Isu tine chokwadi chekuti Horizon Realty yakarasikirwa nezvakawanda kudarika $ 50,000 XNUMX kubva kune iyi Twitter yekumukira. Ndozvamunowana kana iwe uchitaura makotesheni sekuti? Isu tinomhan'ara kutanga, tibvunze mibvunzo gare gare mhando yesangano.?
Chidzidzo 3: Wana zano rakakodzera
Ini handisi kutaura nezvazvo zano repamutemo. Izvo zvinonyanya kukosha muzuva rino zera kuti iwe uve nemumwe munhu waunogona kutendeuka kuti ubvunze, "chii chandinofanira kuziva". Kune makuru masangano zvakakosha kuti iwe uve neyako yekutengesa uye yePR timu patafura. Kune madiki masangano zvingave zviri wezvemagariro media consultant, waunofambidzana naye, kana kunyangwe mudzidzi wako wezhizha. Chero ani zvaari, ita shuwa kuti iwe unowana nzwisiso yechokwadi yezvingaitika, maitiro aunofanira kupindura, uye ndezvipi zvingangoguma zvaitika.
Kutaurirana kuri kuchinja. Iyo ingave yaive diki nyaya yemuno makore mashoma apfuura inogona kuve furawa yenyika nhasi. Ita shuwa kuti iwe unonzwisisa zvakakwana izvo zvinoita kuti mugwagwa usati waita muhondo yehukama neruzhinji.
Jul 30, 2009 na1:28 PM
Mumwe muenzaniso wenguva pfupi yapfuura wekuchinja uku ndeweUnited Airlines yakaridza muimbi Dave Carroll mushure mekupwanya gitare rake rinodhura raTaylor. Vhidhiyo yake, "United Breaks Guitars" yakabva yaita hutachiona uye - nepo kudonha kweUS $ 180M kuderera - kudhurira United imwe mhando yemhando.